Jelly skrini idambudziko rinokanganisa iyo nyowani iPad mini | IPhone nhau
Jelly-senge skrini inetso inobata iyo nyowani iPad mini
Dzimwe nguva matambudziko ane zviyero zvemidziyo anodudzirwa mune chaiwo mwenje inodonhedza kana sezvazviri kunge zviri kuitika muchizvarwa chitsva chechitanhatu iPad mini, nezviratidziro zvinoratidza "Gelatinous displacement" inova iyo shanduro ye "jelly scrolling » muChirungu.
Iri dambudziko hariratidzike sekubata vese vashandisi zvakaenzana uye neizvi isu tinoreva kuti tichiona mushandisi iyeye kwete iyo nyowani iPad mini. Dambudziko nderekuti kana iwe uchifambisa munwe wako pachiratidziri, iwo mavara senge ari kubvunda uye zvinokanganisa vamwe vashandisi kupfuura vamwe. Nekuona isu tinogona kujaira kwazviri uye izvi zvinogara pane izvo, asi vashandisi vazhinji vanogona kuita dzungu kana kunzwa zvakashata nekuda kwedambudziko iri pachiratidziri.
Un tweet yakatumirwa nemupepeti weVerge Dieter Bohn, inonyatsoratidza izvi paPad mini skrini:
Heino inononoka-mo vhidhiyo yekutsikisa paPad Min ini ndakadzora KUNYANYA ZVAKAWANDA mufuremu-ne-furemu nhanho kuburikidza. Tarisa uone kuti kurudyi kunokwira nekukurumidza kupfuura kuruboshwe.
Mukushandisa chaiko hautombozviona, asi nguva dzese zvino zvinozoonekwa. Mumamiriro ezvinhu inoenda zvachose pic.twitter.com/iq9LGJzsDI
Parizvino dambudziko hariratidzike kunge rakangoita mashoma mayunitsi, iri dambudziko rakapararira mumidziyo mizhinji. Izvi zvinoratidzwa sekutsvedza kunonoka kwechikamu chemavara kubva kune rumwe rutivi kupfuura iro panguva yekutsvaga.
Zvese zvinhu zvinoratidza kuti idambudziko rakajairika mune ese madhizaina matsva uye ikozvino Inoramba ichionekwa kana iri nekuda kwekutadza kweiyo LCD pani pachayo yakaiswa muiyo mini mini kana iko kukundikana mu firmware kana software. Chero zvazvingaitika, iyo iPad Pro kana iyo nyowani iPhone ine zororo reti ye120Hz haina dambudziko iri nekuda kwenzvimbo yepamusoro yekuzorodza.
Mumwe mushandisi anogona kuona kupfuura mumwe "kukundikana uku" uye kune vazhinji zvinogona kutova dambudziko rezungu kana uchitsvaga. Chero zvazvingaitika, zvese zvinoratidza kuti dambudziko iri riripo mumidziyo mitsva uye tichaona mafambiro anoita nyaya. Iwe unayo imwe yeiyi nyowani iPad mini? Iwe unoona here iyi jelly-senge yekufamba mhedzisiro? Siya yako maonero mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Jelly-senge skrini inetso inobata iyo nyowani iPad mini
Aya ndiwo marambiro matsva iPhone 13 kudonha nekuvhunduka
Mhinduro yekutadza kuzarura neApple Watch ichauya nekukurumidza